Mapisarema 88 Kushaiwa Tariro. Chii chinoitika kana shungu dzikatonga pamusoro pe Kutenda
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mapisarema 88 Kushaiwa Tariro. Chii chinoitika kana shungu dzikatonga pamusoro pe Kutenda
Mapisarema 88 Kushaiwa Tariro. Chii chinoitika kana shungu dzikatonga pamusoro pe Kutenda
Mapisarema 88 inobata pamusoro peshungu dzakadzama kwazvo nekupererwa.
Isu vanhu tinotongwa zvakanyanya neshungu asi shungu idzi dzine kuraira kwakaneta matiri.
Vanhu vakanaka vanorwadziswa uye vanosangana nekurwadziwa kwakadzama kwazvo muhupenyu.
Chero zano rinosundwa neshungu kazhinji rinokundikana.
Zvinhu pazvinoshata, shungu dzedu dzinoshaiwa hudzamu hunodiwa kuti tikunde.
Shungu dzakafanana nenheyo dzisina kudzika dzisingagoni kutakura mhepo zhinji dzehupenyu.
Pachokwadi, Pisarema iri rwiyo rwekurwadziwa uye kusuwa. Kurwadziwa kwemutsvene mumwechete chidzidzo kune mumwe.
Uyu munhu akasangana nezvakawanda zvakadzama muzvinetso zvehupenyu.
SaJobo tinotambura kugara tiri vakatendeka patinoita kunge tasiiwa. Kushaiwa amira nesu kutukwa kuriko pamazuva ano kunoparadza mafungiro edu kwotisiya takasuwa, takaputsika, tisina simba uye tichinzwa tisina maturo.
Takazadzwa nezvinetso zvehupenyu, tinonzwa takatemwa kubviswa pakufamba kwakafanira kwezviitiko zvehupenyu hwevanhu. Tariro dzedu dzinodzikisirwa apo tinonzwa takaraswa uye takaputswa moyo. Hupenyu hwedu hunoita sedambe. Tichishuwa kuti dai tisina kubvira taberekwa.
Kwaive nerima kwemaawa matatu pakafa Jesu. Kuwedzera kuipa pakutambudzika, kurwadziwa uye kutongwa kwake. Akasangana nekurwadziswa kukuru panyama uye mundangariro.
Mwari haasingoriko kuitira budiriro yedu asiwo pakuomerwa nekukurirwa kwedu.
Asiwo kuomerwa nekukurirwa ndidzo shamhu dzinonatsa hunhu hwedu.
Pisarema iri rinotipa mufananidzo wakajeka wekutambudzika.
Uye hakuna mhinduro yakajeka. Kurwadziwa nekutambudzika inyaya yakadzama kwazvo.
Bhaibheri rine chokwadi chakadzama pamusoro pemarwadzo nekurasikirwa muhupenyu. Zvinopa hondo ine simba kwazvo kusimba redu rekutenda. Kutenda kunofa zviri nyore muzviitiko zvakaipa.
Jona aive mudambudziko rakadzama pavakamukandira kunze kwechikepe. Asi aive asingazivi chiro pamusoro pehove yaizomutora yonomuisa kunyika yakaoma.
Asi chero Jona paaive mudumbu rehove yaizomuponesa, akaramba achinzwa kurwadziwa sekunge aive mugehema.
JONA 2:1 Ipapo Jona akanyengetera kuna JEHOVA Mwari wake ari mudumbu rehove.
2 Akati, "Ndakadana kuna JEHOVA ndiri munhamo yangu, Akandipindura; Ndakadana ndiri mudumbu reSheori, Imi mukanzwa izwi rangu.
Saka Jona, nekushaiwa ruzivo pamusoro pezvairongwa kuitwa naMwari, aingoziva pamusoro pekutambudzika kwake panguva iyoyo. Akanyura mumatambudziko ake, haana kurangarira kuti Mwari aida kuzadzisa zvipi.
JONA 2:7 Mweya wangu wakati uchiziya mukati mangu, ndikarangarira JEHOVA; Munyengetero wangu ukapinda kwamuri muTemberi yenyu tsvene.
Kubva pana Jona tinodzidza chidzidzo chikuru. Chinhu chinoshanda chete pakukunda kurwadziwa nekupererwa ndiwo munamato.
Kana zvinhu zvikanyatsoipa, zvinofanira kutisvitsa pamabvi pakunamata.
JONA 2:10 JEHOVA akataura nehove, ikandorutsira Jona panyika yakaoma.
Pavakanzwa kuti Jona akauya achibva mumuromo mehove nekuti vaitenda muna mwari wehove kupfurikidza kurutswa, vanhu vemuNiniva vakabva vatenda kuti Jona aive muprofita. Pamusoro pazvose, aive abuda mumuromo mamwari wavo. Saka vakabva vamuterera.
Simoni wekuSairini akabatira Mwari nekubata kukuru paakatakura muchinjikwa waJesu. Asi aive asingadi kuita izvi akatomanikidzwa kuzviita.
MATEO 27:32 Vakati vachibuda, vakawana munhu wekurini wainzi Simoni. Vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjikwa wake.
Chidzidzo chakarema kwatiri. Hatidi kuita zvinodiwa naMwari ipapo Mwari anobva atimanikidza kuzviita, zvichipikisana nezvido zvedu.
Saka shungu dzedu dzezvatinoda nezvatisingadi dzinobva dzatinyengera zviri nyore.
Nzira dzaMwari hadzizi nzira dzedu.
9 Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu.
Kazhinji Mwari anodzikamisa shungu dzedu nesando yemarwadzo kuti tidzidze kusavimba neshungu dzedu uye mafungiro edu. Kunyanya kana kusuwa kukaputira tariro dzedu.
Mapisarema 88 inoona munhu ari mukupererwa kukuru asisina tariro nekuda kwekurwadziwa nekushungurudzika kukuru.
Asi mapisarem 88 ine chinhu chimwechete chakanaka. Inotanga nemunamato.
Mumamato wakatendeka wemunhu ari kushungurudzika. Ari kunzwa akaraswa, achirarama mukurwadziwa kukuru asi akanamata.
Izvi zvinotidzidzisa kuti munamato ndicho chega chinhu chinotigonesa kuenderera mberi kana zvose zvaita rima.
Chinhu chisina kujairika. Zvakaipa zvinoshandurwa kuva zvakanaka kana zvikatisundira pamabvi kuti tinamate.
Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiireiko.
Jesu akachema pamuchinjikwa kuratidza kuti Iye, semunhu, aisvikawo pakurwadziwa. SeMuponesi wedu, aigovana nesu kushungurudzika kwedu. Saka anotinzwisisa mukunyangadza kwedu uye mukushaiwa kurudziro kwedu.
Iyi ndiyo yaive nguva yaive nerima guru. Pavakaviga Jesu vakaviga tariro yenyika. Rufu rwaive rwakurira zvinorwadza parudzi rwevanhu. Rwendo rwusingadzokwi kana munhu arwufamba.
Shungu dzevadzidzi dzaive dzaputirwa nerima, nekushaiwa simba, nekurwadziwa, nekudemba uye kusuwa. Vabatsiri vasine simba.
Asi shungu dzerudzi rupi zvarwo ndedzenguva duku.
Havana chavaiziva pamusoro perumuko rwaiuya.
Kukunda nekuparadzwa zvinotisimudzira kana kutiwisira pasi. Saka shungu dzedu dzakafanana neyo-yo.
Mufaro webudiriro yazuro unobviswa zviri nyore nekurwadziwa kunounzwa nedambudziko ranhasi.
Mafungiro nemanzwiro akaipa anotiita kuti tive vasine simba vakaneta. Tinonzwa kunyara kutaura nezvazvo.
Tinoterera kupupura kwekukunda nerubatsiro rwemweya unoera zvakasangana nevamwe. Isu tokundikana tonzwa kunge tiri vakundikani. Tinonyemwerera tonyepera kunge zviri kutiitira asi pasi pemoyo yedu tichiungudza patinenge tiri tega.
Shungu dzedu dzinokurudzira nekupa nzira kuhunhu hwedu.
Kuzvikudza kunotiita kuti tienderere mberi munzira yakaipa. Kushaiwa mufaro, kunopiwa kwatiri semuedzo, kunogona kutiita kuti tirase nzira yakanaka.
Asi chimwe chinhu chakanaka ndechekuti kurwa neshungu dzedu kunogona kutiita vanhu vanonzwisisa vamwe vanhu vari kusangana nedambudziko rimwechete iroro zviri nani.
Kubudirira zvizhinji kunobereka kuzvitutumadza.
Kukundikana kunotiita vakazvirereka uye vanonzwisisa zviri nani vamwe vanenge vakundikana. Kukundikana kunotibatsira kuti tizvirereke kune vamwe vakaneta vakaremerwa. Kunotibatsira kufunga pamusoro pevamwe zviri nani torega kufunga “nezvedu” nguva dzese.
Kuzvideredza hakusi kufunga zvishoma kwazvo nezvangu, kusatofunga nezvangu.
Kukundikana nekunzwa usina maturo kunobatsira kubvisa kufunga kwangu pamusoro pezvangu chete sezvo zvinhu izvozvo hazvina kufanira kutariswa.
Pandinomira kufunga nezvangu, kune mukana uri nani wekuti ndinogona kubata kuda kwaMwari. Nekuti kuda kwangu hakusi kuda kwaMwari.
Mwari anoti ndinofanira kufa kuzvivi zvangu.
I VAKORINTE 15:31 ... kuti ndinofa zuva rimwe nerimwe.
Chitunha hachina shungu. Saka kuva neshungu hachisi chinhu chakanaka kuti chititungamirire mukuda kwaMwari.
Shungu dzekuzvitutumadza kunotiita kuti titye kukurirwa. Asi Mwari anotiita kuti tirasikirwe nezvinhu zvinenge zvisina kutinakira. Muti unopururirwa unokura zviri nani kwazvo. Kutemwa kunorwadza asi kwakatinakira mukufamba kwenguva.
Tese tine shungu dzakanyanyisa dzinoda kubviswa kwatiri naMwari.
Mafungiro edu, zvichibva pakutaura kwemunhu uya akachenjera anonzi Einstein, chingori chinhu chatinonongana nacho patinosvitsa makore gumi nemasere. Saka zvakawanda zvatinoziva hazvina basa nekuzivikanwa. Mwari anoda kuti tirasikirwe nezvinhu izvi zvese.
Kutsikirira shungu dzedu hakutibatsiri sezvo dzinozomuka zvakare kumberi.
kutsiva shungu idzi zvakanaka nechimwe chinhu chakadzikama.
Minamato neMagwaro ndizvo zvitubu zvekutenda. Hatizodi kunamata kana tikanzwa kunge Mwari haasi kuzodavira minamato yedu. Saka rudo rwekunamata ndiwo moto unotungidza zvakare kutenda kwedu.
Kutenda nekuvimba mune zvinoitwa naMwari, kwete mune zvatinoita isu.
Jona aive asisina tariro ari mudutu riya. Akakumbira kukandirwa kunze nekuti aiziva kuti dutu iri raimusundira kuti adzokere kunaMwari. Neimwe nzira Mwari aizopindira kunyange dai Jona aive asina ruzivo rwekuti Mwari vaizopindira sei. Saka pasi pemoyo wake Jona akamutsa kutenda kwake munaMwari. Kutenda ndiko chete mushonga unorapa kushaiwa tariro.
VAHEBERU 11:1 Zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotaririra, umbowo hwezvinhu zvatisingavoni.
Chidzidzo chikuru ndechekuti kutenda kunobereka tariro.
Jona haana kuedza kuudza Mwari kuti angamubatsira sei. Jona akangovimba kuti Mwari achaita zvaanoda naye.
Kazhinji kushaiwa tariro kwedu kunobva pakuudza Mwari zvatinoda totadza kuzviwana.
Tinofungira kuti zvatinoda ndicho chaive chinhu chakanakisa kwatiri.
Tinofanira kudzidza kusiya Mwari kuti adavire nenzira yake iye inowanzova yakasiyana nenzira yedu.
Kutenda kunotiita kuti titende kuti Mwari anodaira, asi kazhinji nenzira dzataive tisina kutarisira uye kwete nenzira dzataida.
Ndiko kukunda kunoita kutenda pamusoro pekupererwa.
Kana zvikasaitika nenzira yandaida, kutenda kunoti zvichaitika neimwe nzira. Saka tinomirira mutariro pachinzvimbo chekupererwa apo masuwo etariro dzedu anenge asingavhuriki.
Munamato waIshe wedu unotiudza kuti titange kusimbirira pamusoro pehushe hwaMwari.
MATEO 6:10 Vushe bwenyu ngabwuvuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.
Zvinoitika panyika zvinobudirira chete kana zvaratidzira zvinoitika kudenga. Saka tinofanira kuziva Bhaibheri kuitira kuti tizivewo kuda kwaMwari kwedenga.
MATEO 6:33 Asi tangai kutsvaka vushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri.
Tinotsvaga hushe hwaMwari nekuziva zvakanyorwa muBhaibheri nekuti izvi zvinotiudza kuti totenda mune zvipi kuitira nguva yedu yanhasi. Patinotenda nekutevera Magwaro, Mwari anotiwedzera zvinhu uye mikana yatinoda. Izvi zvinogona kuuyawo zvakasiyana kwazvo nezvatinoda.
VAROMA 8:28 Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata pamwechete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadanwa sezvaakafunga.
Kana tichida Mwari hapana chinoenda nenzira isiriyo.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakaoma kwazvo pazvidzidzo zvekutenda chatinofanira kuziva .
Zvese zvinoitika, zvakanaka kana zvakaipa, zvakanakira isu.
Kana tikanzwa kunge zvakaipa, tinenge takatarisira zvinhu zvisiriizvo.
Levi akatora mucheka wakakora kuti agadzire matente kunzvimbo dzegoridhe muCalifonia. Asi vaishanda mumigodhi vaive nematende avo. Akapererwa pakatadza kutengwa matende ake. Akabva ashandura pfungwa dzake akavaitira midhebhe. Mucheka wakasimba uyu hauna kubvaruka, akabva ava nembiri uye nemari zhinji nekuda kwemajinhi ake eLevis.
VAFIRIPI 4:11 Handirevi izvozvi nokuti ndinoshaiwa, nokuti ini ndakadzidza kutenda nezvose zvandinazvo.
Shungu dzinotifadza kana kutisuwisa zvichienderana nezvinotiwira.
Asi kutenda kwakaita kuti Pauro ave nemufaro muzviitiko zvese zvaimuwira. Tarirai zvaakasangana nazvo.
II VAKORINTE 11:23 Ivo vashumiri vaKristu here? (Ndinotaura somunhu unopenga), zvikuru ini; pamabasa ndinovapfuvura, pakusungwa patorongo ndinovapfuvura, pakurobwa zvikuru-kuru, parufu kazhinji.
24 Ndakarobwa navaJudha kashanu, shamhu dzinamakumi matatu nepfumbamwe.
25 Katatu ndakarobwa netsvimbo, kamwe ndakatakwa namabwe, katatu ndakaputsikirwa nechikepe vusiku bwumwe namasikati ndakanga ndiri mugungwa;
26 Panzendo kazhinji, panjodzi dzenzizi, panjodzi dzamakororo, panjodzi dzovorudzi rwangu, panjodzi dzavahedheni, panjodzi muguta, panjodzi murenje, panjodzi mugungwa, panjodzi pakati pehama dzenhema;
27 Pakubata napakutambura, pakuvata kazhinji takarindira, panzara nenyota, pakuzvinyima zvokudya kazhinji, pachando napakushaiwa zvokufuka.
Paakatarisana nezvese izvi, akazotaura kutii nekutambudzika kwake.
II VAKORINTE 4:17 Nokuti kutambudzika kwedu, kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvo-naka kusingaperi;
Kutambudzika kwakareruka. Mhosho duku. Saka kutenda kwake kwakamupa maonero akamuita munhu asingakundikane. Nei?
I VATESARONIKA 3:3 Kuti kurege kuva nomunhu unozununguswa nenhamo idzi, nokuti munoziva mumene kuti takagadzirirwa izvozvo. Kutenda kwakatarisana sei nematambudziko aya?
Aiziva kuti Mwari aive pamusoro pehupenyu hwake uye hakuna chiro chaizoitika kwaari kunze kwekunge chatenderwa naMwari.
Kuomerwa kunotiedza. Kuomerwa kunotisimbisa. Pauro aive akasimba kwazvo zvekuti Satani haana chaaigona kuita kuti amukurire. Pauro paaisvika chero nzvimbo, Diaborosi ainzwa akakurirwa. Satani ndiye aitopererwa.
Chakavanzika chikuru chekutenda ndechekuti nekutenda munovimba kuti Mwari ndiye ane simba pamusoro pezvinhu zvese.
Kana tikararama hupenyu huna Mwari ipapo Mwari anotitaririra uye tinozokunda kugutsikana nezviitiko zvese zvinotiwira. Chero kana zviitiko zvinenge zvichitiwira zvisizvo zvatinenge tichida, kutenda kunotibvumira kugamuchira zvese nekugutsikana. Kuti izvi ndizvo zvandapihwa naShe.
I TIMOTIO 6:6 Zvino kunamata Mwari pamwechete nokugutsikana nezvatinazvo ndizvo zvinofumisa kwazvo;
Kutenda kunoita kuti tibvise meso edu patiri.
Patinotarira pakadzika pehupenyu hwedu hatifari nezvatinoona. Neshungu tinoshaiwa simba.
Kana tikakoshesa kushandira Mwari zvichibva paMagwaro tichibatsira vamwe, ipapo tinobvisa meso edu patiri uye pakuzvida kwedu.
Vanhu vakapfuma havana mufaro.
Zvinozivikanwa kuti mari haitenge mufaro.
Tinokasika kusvotwa nechatinenge tatenga hachitipi mufaro wekutanga nekuti shungu dzedu ndedzenguva duku hadzina kugadzikika.
Hatiwane mufaro patinochitarisa. Kana kuchitenga.
Tinowana mufaro patinokanganwa nezvedu zvese totanga kubatsira vamwe vanhu.
Kunogaroita vamwe vane matambudziko makuru kudarika edu.
Munokwanisa chete kuwana mufaro kana mukamira kuutsvaga.
DEUTERONOMIO 28:2 Kuropafadzwa uku kwose kuchaitika kwauri, uchatevererwa nako, kana uchiteerera inzwi raJEHOVA Mwari wako.
Maropafadzo aMwari, akafanana nemufaro, anotitevera. Zvinoreva kuti anobva kumashure kwedu.
Haangateverwi kana ari ndiwo zvinangwa zvedu zvatinenge tichimanyisana nazvo .
Saka maropafadzo aMwari chaiwo haasi zvinhu zvatingadzingirire nesimba redu. Mwari anotumira maropafadzo aya kwatiri isu tisingazivi kuti ari kuuya. Haazovi zvinhu zvatinenge tichitsvaga. Nekuti hatigoni kuona chinhu chinobva shure kwedu chinotitevera. Tinoona zvinhu zviri mberi kwedu chete.
Shungu dzinotitonga kana tikatsvaga zvinangwa zvedu isu.
Chero mukawana basa ramunenge muchitsvaga, hazvirevi kuti muchafara mariri. Saka shungu dzenyu dzinenge dzakurasisai zvakare. Kushaiwa mufaro chinhu chakaipa.
Asi kugutsikana nezvamunazvo muchitendera Mwari kuwedzera nenzira dzamusina kutarisira kunokutendera kurarama hupenyu hwekutenda. Kutenda kunoita kuti mugutsikane, zvisinei nekuti muri muzviitiko zvakaita sei.
Kugutsikana chinhu chakanaka chisingagoni kuparadzwa naDiaborosi.
Kana mukagutsikana shungu dzenyu dzinenge dzakanaka nekuti kutenda kunotonga pfungwa dzenyu pachinzvimbo chekuti kupererwa kutonge mafungiro enyu.
MABASA 14:22 Vachisimbisa mweya yavadzidzi, vachivaraira kuti vatsungirire pakutenda, vachiti, tinofanira kupinda vushe bwaMwari namadambudziko mazhinji.
Kutenda kunotiyambutsa matambudziko ehupenyu huno.
Kutenda kunoreva kuti meso edu ari pana Jesu neBhaibheri, kwete pakubudirira kwedu kana kukundikana.
Kutenda muMagwaro kuri nani kwazvo pakushandiswa neshungu dzedu.
Kutenda ndiko nheyo dzakasimba pazvese. Shungu chinhu chenguva duku chinopararira nekukasika.
Pisarema rekushaiwa Tariro. Mapisarema 88.
Chii chinoitika kana tikakurirwa nekupererwa kwedu. Kuti shungu dzakaipa dzinoparadza sei tariro uye kudzikisira kutenda.
MAPISAREMA 88:1 Rwiyo, Pisarema ravanakomana vaKora; kumutungamiriri wokuimba; nomuimbirwo weMaharati Reanoti. Rwiyo rweMashiri rwaHemani muEzirahi. JEHOVA, Mwari muponesi wangu, Ndakachema masikati nousiku pamberi penyu
Chinhu chakanaka chete paPisarema iri ndechekuti akanzwa kuti anofanira kunamata.
MAPISAREMA 88:2 Munyengetero wangu ngaupinde pamberi penyu; Rerekerai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu;
Rudo rwekunamata ndiyo nzira imwechete yaaive nayo yekukurira kushaiwa tariro kwake.
MAPISAREMA 88:3 Nokuti mweya wangu uzere namatambudziko, Upenyu hwangu hwoswedera kuSheori.
Zvaimuwira zvaive zvamubira tariro yose.
MAPISAREMA 88:4 Ndinoverengwa pamwechete navanoburukira kugomba; Ndakafanana nomunhu anoshaiwa mubatsiri;
Kushungurudzika kwehupenyu hwangu kwakakura kwazvo zvekuti ndinonzwa sendakafa kare.
MAPISAREMA 88:5 Ndakarashirwa pakati pavakafa, Savakaurawa vavete mubwiro, Vamusati mucharangarira; Vakagurwa paruoko rwenyu.
Ndinonzwa ndakaraswa naMwari. Ndakachekwa kubva paari sezvo asingadaviri minamato yangu. Saka zvakafanana nekuti ndakafa ndakavigwa ndikakanganwikwa.
MAPISAREMA 88:6 Makandiisa mugomba rakadzika-dzika, Panzvimbo dzine rima, makadzika kwazvo.
Kudzama kwekupererwa. Hapana chiedza. Hapana mukana wekupunyuka.
Kana tikakurirwa nezvinenge zvatiwira zvinenge zvakuita sekusisina tariro asi rufu.
MAPISAREMA 88:7 Hasha dzenyu dzinorema kwazvo pamusoro pangu, Makanditambudza namafungu enyu ose
Kana zvinhu zvikaipa zviri nyore kunzwa kunge kutonga kwaMwari kuri kufamba pahupenyu hwedu kwakaita semafungu.
Zvakawandisa zvinokanganisika. Tinonzwa kunge kutsamwa kwaMwari kwese kwakaiswa patiri.
MAPISAREMA 88:8 Makaisa vazikani vangu kure neni; Makandiita chinhu chinonyangadza kwavari; Ndakapfigirwa, handigoni kubuda.
Ndakabviswa kubva kushamwari, zvichida nechirwere chakaipa. Ndakaraswa. Ndakarambwa. Ndingori ndega.
MAPISAREMA 88:9 Ziso rangu ropera nemhaka yokutambudzika; Ndakadana kwamuri, JEHOVA, zuva rimwe nerimwe, Ndakatambanudzira maoko angu kwamuri.
Akasuwa kwazvo. Asi zuva rimwe nerimwe anotambanudzira mavoko ake kuna Mwari achinamata nekuzvipa kwaari. Ndicho chinhu chimwechete chakanaka.
MAPISAREMA 88:10 Mungaitira vakafa zvinoshamisa here? Ko vakaparara vangamuka vakakurumbidzai here?
Munondiurairei Mwari? Ndingakurumbidzai ndakafa here?
MAPISAREMA 88:11 Hunyoro hwenyu hungaparidzwa mubwiro here? Kana kutendeka kwenyu mukuparadza here?
Ndingapupura mabasa enyu akanaka ndava muguva here?
MAPISAREMA 88:12 Zvishamiso zvenyu zvingazikanwa murima here? Nokururama kwenyu panyika yokukanganwa here?
Vakafa vakakanganwikwa. Mubwiro mune rima. Ndingaitirei Mwari ndiri imomo?
MAPISAREMA 88:13 Asi ndakachema kwamuri, JEHOVA, Munyengetero wangu uchasvika pamberi penyu mangwanani.
Zvakare, kuita kwakanaka kwekukurira kupererwa kwake. Akatsungirira pakunamata.
MAPISAREMA 88:14 JEHOVA, munorashireiko mweya wangu? Munovanzireiko chiso chenyu kwandiri?
Zvinhu pazvinoshata kwazvo tinobva tatenda kuti Mwari atirasha.
MAPISAREMA 88:15 Kubva pauduku hwangu ndakanga ndichitambudzwa ndichirwiso-fa; Kana ndichityiswa nemi ndinoshaiwa mano.
Kutsamwa mumwoyo kuparadzwa. Kana pfungwa dzedu dzakakanganisika, hatigoni kushingirira chinhu chakanaka.
MAPISAREMA 88:16 Kutsamwa kwenyu kukuru kwakapfuura napamusoro pangu; Kutyisa kwenyu kwakandiparadza.
Kutsamwa kwaMwari kunotyisa.
MAPISAREMA 88:17 Zvakandikomberedza zuva rose semvura; Zvakandipoteredza pamwechete.
Kupererwa kunotiita kuti tifunge kuti Mwari ari kutiranga zvisina magumo.
MAPISAREMA 88:18 Iye, anondida, neshamwari yangu, makavaisa kure neni, Nomuzikani wangu ari murima.
Hapasisina shamwari. Hapana anondida. Rima remumoyo rehundega-ndega.
Nhaka yakaipa kwazvo yezvinoitika kwatiri kana tikatora mazano emoyo yedu neshungu dzedu panoitika zvakaipa kazvo muhupenyu.
Shungu dzedu dzinogona kuvimbika kwazvo kana tiri pakufunganya kukuru.
Pisarema iri rinoratidza kukundikana kunoita shungu dzedu kushandidzana nematambudziko chaiwo ehupenyu.
Munhu uyu aive akamedzwa kwazvo nematambudziko ehupenyu hwake iye zvekuti haana kugona kuona kana tariro.
Nzira imwechete chete yatinogona kukunda nayo muhupenyu kuvakira panheyo dzekutenda.
Pachinzvimbo chekungotarisa dambudzoko rangu, ndinofanira kudzidza kutarisa kunaJesu.
VAEFESO 2:20 Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaporofita, Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona.
Mapostora akanyora Testamente Itsva. Maprofita akanyora Testamente yekare.
MaTestamente aya ose ari maviri anonongedzera Jesu Kristu anova tariro yedu yoga. Hatigoni kuzviponesa.
Jesu akatifira. Hakuna munhu aikwanisa kumufira.
Kunyangwe kana tikafira murima nekupererwa, asi mangwanani erumuko anouya.
Chero chaitika izvozvi, ziso rekutenda rinoona Denga idzva neNyika itsva.
Ipapo matambudziko edu anhasi nekurwadziwa kwedu kwese zvinokanganwikwa.
Tariro yedu iri muzvinhu zvenguva inouya, kwete mune zviri kutiwira nhasi.